အပျို ရင်သား နဲ့ အအိုရင်သားတို့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ.နှိပ်ကြည့်လိုက်. - APANNPYAY MEDIA
Home / ဗဟုသုတအစုံ / အပျို ရင်သား နဲ့ အအိုရင်သားတို့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ.နှိပ်ကြည့်လိုက်.
အပျို ရင်သား နဲ့ အအိုရင်သားတို့ ဘယ်လိုကွာခြားလဲ.နှိပ်ကြည့်လိုက်.
Apann Pyay 7:13:00 AM ဗဟုသုတအစုံ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီဆိုတာနဲ့ သဘာဝတရားက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ရဲ့ ရင်သားကို ပြုပြင်ပါတော့တယ်။ သည်အခါမှာ ရင်သားဟာ မူလကထက်လည်း ကြီးထွားလာပါတယ်။ အလေးချိန်အားဖြင့် တစ်ဖက်ကို တစ်ပေါင် နှုန်းလောက်အထိတောင် ကြီးထွားလာနိုင်တယ်လို့ အဆိုရှိတယ်။ တချို့အမျိုးသမီးတွေမှာ အဲသလို ရင်သား ကြီးထွားလာလို့ ရင်သားမှာ အကြောပြတ်သလို အရာမျိုးတွေ ရှိလာတတ်တယ်။ (အပျိုပေမယ့် ၀လွန်း၊ ရင်သား ထွားလွန်းရင်လည်း အလားတူပဲ အကြောပြတ်တတ်တာကို သတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။)